सेनाले फेरि सङ्गठनको साखसँगै मुलुकको इज्जत बढायाे - नेपालबहस
सेनाले फेरि सङ्गठनको साखसँगै मुलुकको इज्जत बढायाे
| ९:३२:५८ मा प्रकाशित
२६ चैत, काठमाडाैं । त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एक पटक फेरि सङ्गठनको साखसँगै मुलुकको इज्जत बढाएको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा बुधबार भएको एएफसी कप–२०२१ खेलमा सेनाले श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लबलाई १ का विरुद्ध ५ गोलले पराजित गरेको छ ।
एशियन फुटबल कन्फेडेरेसन ‘एएफसी’ को कार्यक्रमअनुसार त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबको आयोजनामा उक्त एएफसी कप–२०२१ भएको हो । दर्शकको बाक्लो उपस्थिति रहेको उक्त खेलले विभागीय टोलीका रूपमा रहेको सेनाको खेलकुद क्षेत्रको च्याम्पियनको छविलाई थप उजागर गरेको छ । नेपालले दोस्रो चरणमा भारतको बेङ्गलुरु फुटबल क्लबसँग खेल्नेछ । उक्त प्रतियोगिता वैशाख १ गते हुँदैछ ।
विजय प्राप्त गरेपछि त्रिभुवन आर्मी क्लबका मुख्य प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले दोस्रो चरण प्रवेश गर्ने टिमको पहिलो लक्ष्य पूरा भएको प्रतिक्रिया दिए । पछिल्ला वर्षमा खेलकुद क्षेत्रमा सेनाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरिरहेको छ । आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा नेपाली सेना राष्ट्रिय च्याम्पियन बनेको थियो । दक्षिण एशियाली खेलकुद ‘साग’ मा १७९ सैनिक खेलाडीका सहभागी भएको सेनाले नेपालको खेलकुदको छविलाई विश्व समुदायमा उजागर गरेको थियो ।
राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह नियुक्त ३ हप्ता पहिले
त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेतलाई जनही चार लाख ३ हप्ता पहिले
आहा रारा गोल्डकप शनिबारदेखि शुरु हुने ३ हप्ता पहिले
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा पुग्ने विरामीहरुको संख्या बढ्दो ४८ मिनेट पहिले
शेयरबजारमा निफ्रा, मेगा र एनसीसी बैंकको शेयरमा करिब १७ लाख बढी कित्ता माग, कुनको कति ? १८ घण्टा पहिले
कोरोनाका कारण पत्रकार अधिकारीको मृत्यु २३ घण्टा पहिले
महिलालाई ज्युँदै आगो लगाउने र तेजाब प्रहार घटनाप्रति आयोगको चिन्ता २ दिन पहिले
आठ महीनाको अवधिमा ८८१ खाद्य वस्तुको नमूना परीक्षण ४ हप्ता पहिले
अहिलेको युग विकास र समृद्धिको युग हो : मुख्यमन्त्री राई ३ हप्ता पहिले
बझाङमा भारतबाट फर्केका कोरोना संक्रमितको मृत्यु १६ घण्टा पहिले
विज्ञ भन्छन्, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कनु ३ हप्ता पहिले
गणपति लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर ३ हप्ता पहिले
सांसदको प्रश्न : संसद बोलाउनु भनेको सदन चलाउनु मात्रै होइन ? ३ हप्ता पहिले
जलक्षेत्रको सुरक्षामा इरानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने २ वर्ष पहिले
बिध ल्याबको शुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्दा थप २०० छुट ! ८ महिना पहिले
अत्यधिक चिसोले हुम्लामा पानीको धारामा बरफ जम्न थाल्यो ५ महिना पहिले